Fikarakaran'ny mpanjifa + - Hebei Shenli Rigging Co., Ltd.
Hebei Shenli dia manolo-tena amin'ny fanatsarana hatrany ny vokatra sy serivisy omenay, ary ezahinay ny hamaly ny fangatahana avo indrindra azon'ny mpanjifanay atao. Mba hahazoana antoka fa afa-po ny filan'ny mpampiasa ny vokatra, dia tianay ny hanome ny hevitrareo amin'ny fotoana rehetra. Noho io antony io dia nanangana tetikady ho an'ny fikarakarana mpanjifa miampy ny serivisy ny orinasanay.
Ny orinasanay dia mino hatrany fa izahay sy ny mpanjifanay dia "vondron'olona manana anjara laharana". Ny fiaraha-miasa dia hahatonga antsika roa ho tsara sy hanana fiaraha-miasa mandresy fandresena.
Manana serivisy telo samihafa izahay ao amin'ny paikadin'ny "Customer Care +".
1. Manolotra ny mpanjifantsika tanteraka ny toerana fanandramana rehetra izahay maimaim-poana amin'ny maha antoko fampiasam-bola fahatelo azy ireo hanampy azy ireo hikirakira vokatra hafa ilain'izy ireo andrana ao an-toerana.
2. Herintaona "Fiantohana kalitao aorian'ny fivarotana serivisy" ho an'ny entanay rehetra. Ary ny mpanjifanay koa dia afaka mahazo serivisy fanampiny rehefa mihoatra ny fotoana iantohana ary vonona koa izahay hanampy azy ireo hamaha ny olany rehetra;
3.Raha manana olana kalitao ny entanay, dia toy izao manaraka izao ny fomba fiasa:
A.we hitadidy santionany amin'io entana io izahay mba hanodinana ny fomba fitiliana rehetra. Anisan'izany ny fitsapana ny akora, ny fitsapana ny hamafin, ny fitsapana ny fihenan'ny enta-mavesatra ary ny fitsapana havizanana.
B.Rehefa nandalo ny fitsapana rehetra nilaina ireo santionany ary nampiseho fahombiazana tsara. Hodinihinay raha toa ka mampiasa vokatra amin'ny fomba marina ny mpampiasa ary hanome sosokevitra arak'izany.
4.Raha tsy voavaha amin'ny alàlan'ny dingana nesorina ny olana dia handefa mpiasa ara-teknika amin'ny orinasanao ny orinasanay ary hamaha ny olana rehetra mifanatrika.